Shan sandood oo iskood isku dhejiya xagaagan | Ragga Stylish
Raaxadeeda darteed iyo fudeydkeeda in xiritaanka velcro uu matalayo, xagaagan kabaha is-adkeynaya waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican markay tahay kabo iska caadi ah.
Caga dhig cagaha marka loo eego qaababka kaleWaa nooc sandal dabacsan, inkasta oo aysan lahayn hufnaan ama faahfaahin casriyeysan oo kaa caawin doonta inaad mooddo moodada. Ku dar iyaga oo gaab ah, jiinis iyo xitaa chinos iyo surwaal dharka ah haddii ay caadi yihiin.
Miuccia Prada waxay ku darsatay suunka canqowga oo dheeri ah kabaha noocan ah si looga dhigo mid ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee ururinta guga / xagaaga ee Prada. Faahfaahin aan xor ahayn. Suun dheeri ah macnaheedu waa taageero dheeraad ah, iyo mawduuca safarka ee aruurinta, wuxuu ka dhigayaa dhammaan dareenka adduunka.
Haddii aad doorbideyso qaar kabo sandal is-adkeynaya, Lammaane cad oo buluug ah ama buluug madow ah ayaa ah sharad aamin ah.
In kasta oo ay wax garaacayaan, kabaha cadcad sidoo kale waxay leeyihiin saamaynta ugu yar ee moodooyinka caadiga ah. Taas waa inaan ku darnaa taas Iftiimintooda ayaa ka dhigaysa inay si aad u wanaagsan u shaqeeyaan xilliga kulaylaha qoraxdu jirto.
Badiyaa, guryaha moodada waaweyn ayaa sharad ku ah moodooyinka dhiiran oo ku daraya laba ama in kabadan sababo kala duwan. Kuwani, tusaale ahaan, waxay ku dhex milmayaan xariijimaha casaanka iyo caddaanka leh daboolidda, natiijaduna waa mid heer sare ah.
Qaabka ugu midabada badan wuxuu ka yimaadaa gacanta shirkadda Isbaanishka ee Mango. Kabaha is-dhejiska ah ee isku-dhafan oo ku dari doona shakhsiyad badan iyo ruuxi xagaaga u muuqda muuqaal caadi ah bilaha soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Kabaha isku-dhejiska ah, kabaha aan caadiga ahayn ee xiiraya xagaagan